Caawinta Isqorista Suuqa Caymiska Caafimaadka - LHC Caawinta Isqorista Suuqa Caymiska Caafimaadka - LHC
Haddii aadan haysan caymis caafimaad, waxaan halkaan u joognaa inaan kaa caawinno sidii aad u codsan lahayd Caawimaad Caafimaad (Medicaid), Qorshaha Caymiska Caafimaadka Carruurta (CHIP), ama Pennie (Caafimaadka Daryeelka Suuqa) khadka taleefanka ama shaqsi ahaan, xilli kasta oo sanadka ah. Waxaan sidoo kale diyaar u nahay inaan ka jawaabno wixii su'aalo ah ee aad ka qabto codsashada caymiska caafimaadka. Wac 717-299-6371 oo codso in lagugu xiro Shaqaalaha Bulshada.
Halkan ka raadi taageerada bulshada iyo ilaha kale ee la heli karo.
Gargaarka Caafimaadka (oo sidoo kale loo yaqaan Medicaid)
Caawimaada Caafimaadka (sidoo kale loo yaqaan Medicaid) waa barnaamij ceymis caafimaad dadweyne oo loo maro gobolka Pennsylvania. Caawimaadda Caafimaadku waxay leedahay xirmo dhammaystiran oo faa'iido leh oo wadaagis kharash aad uyar leh. Waxaa jira noocyo kala duwan oo Medicaid ah oo loogu talagalay dadka waaweyn, carruurta, iyo dadka waaweyn iyo / ama dadka waaweyn ee naafada ah.
Barnaamijka Caymiska Caafimaadka Carruurta (CHIP)
Barnaamijka Caymiska Caafimaadka Carruurta (CHIP) wuxuu sidoo kale bixiyaa caymis dhammaystiran oo loogu talagalay carruurta dakhligooda qoysku aad u sarreeyo si ay ugu qalanto Medical Assistance. Iyada oo ku xidhan dakhliga, CHIP waa mid bilaash ah, mid jaban, ama mid qiimo jaban ah (loogu talagalay qoysaska dakhligoodu sarreeyo). Caruurtu waa inay ahaadaan caymis caafimaad si ay ugu qalmaan.
Suuqa Caymiska Caafimaadka
The Suuqa Caymiska Caafimaadka (oo loo yaqaan "Suuqa suuqa" ama "isweydaarsiga") waa adeeg loo maro dowladda federaalka ah (health.gov) oo ka caawisa dadka in ay wax iibsadaan oo iska diiwaangeliyaan ceymiska caafimaadka oo la awoodi karo. xarumaha, iyo caawinta qof ahaan. Waxaad xaq u yeelan kartaa kabista canshuurta si aad uga caawiso bixinta kharashyada joogtada ah.
Xarunta Caafimaadka ee Lancaster waxay leedahay shaqaale bulsho oo loo tababaray sidii Lataliyeyaal Codsi Shahaadaysan oo Suuqa inay kaa caawiyaan inaad fiiriso u-qalmitaanka Caymiska Suuqa. La-taliyayaasha Codsiga ee la Xaqiijiyay ayaa kaa caawin doona inaad sameysato koonto, dalbatid caymis la awoodi karo, dooran qorshaha ugu wanaagsan ee ku habboon baahiyahaaga, iyo isqorista qorshaha caymiska.
Miyaad horeyba u leedahay caymiska caafimaadka suuqa Suuqa?
Aad ayey muhiim u tahay in aad mar labaad isqorto mid ka mid ah La-taliyayaasha Codsiga La Xaqiijiyay ama adoo wacaya Suuqa Suuqa 1-800-318-2596 ama galitaanka koontadaada daryeelka caafimaadka. Haddii aad tan sameyn weydo, waad waayi kartaa kabistaada canshuurta oo lacagtaada caymiska ayaa kor u kici karta.
Qorshayaasha suuqa suuqyadu way is beddeli karaan sannad kasta, oo ay ku jiraan kharashyada iyo caymiska. Waad ka faa'iidaysan kartaa isbeddelada, mana ogaan kartid waligaa illaa aad isbarbar dhigaysid.
Miyaan u qalmi doonaa kharashyada jeebka yar?
Khadka internetka Xisaabiyaha Kaabida kaa caawin doona inaad fikrad ka hesho waxa uu caymiskaagu noqon doono. Qalabkani wuxuu muujinayaa khidmadaha caymiska caafimaadka iyo kaabayaasha loogu talagalay dadka iibsada caymiska iskood isweydaarsiga caymiska caafimaadka (ama "Suuqyada") oo ay abuurtay Sharciga Daryeelka La Awoodi karo (ACA). Xisaabiyahaan, waxaad geli kartaa heerar kala duwan oo dakhli, da ', iyo cabir qoys si aad uga hesho qiyaas ku saabsan u qalmiddaada kabista iyo intaad kubixin karto caymiska caafimaadka.
Wac 717-299-6371 ama kala hadal takhtar takhasus gaar ah u leh bukaanka mid ka mid ah Goobahayaga si aad ballan uga sameysatid shaqaale bulsheed oo ka fiirsan kara u qalmiddaada barnaamijyo kala duwan.
Waad dalban kartaa sidoo kale online ama ka wac Suuqa Suuqa 1-800-318-2596.
Waxa la keenayo ballanka caawinta isqorista ee shaqaalaha bulshada:
Aqoonsiga - laysanka darawalka, Aqoonsiga gobolka, ama aqoonsi kale oo sawir oo aad haysato
Lacag-bixinnada bishii la soo dhaafay iyo dukumiintiga dakhliyada kale
Diiwaangelinta heerka imigarayshanka
Cashuur celinta (ugu dambeysay)
Bayaanka Bangiga (qaar ka mid ah Qeybaha Caawimaadka Caafimaadka ayaa tan u baahan)
Lambarrada Amniga Bulshada ee dhammaan xubnaha reerka